Pits संग चेरी देखि सुगन्धित जाम खाना पकाउने
घर पीसा मायालु आमा वा हजुरआमा वा भण्डारमा किनेको - यसले हामीलाई कुनै पनि जाम कहिल्यै स्वाद गरेको असम्भाव्य छ। यो संरक्षण फल को सबै भन्दा लोकप्रिय विधि ताजा बोट उत्पादनहरु किनभने गर्मी विभिन्न छ, र जाडो अघि राख्न चाहन्छु, र यो अक्सर बस कतै देश देखि बाउनटिफूल बाली राख्न भनेर हुन्छ। जाम चेरी विशेष गरी यदि तपाईं बीउ हटाउन छैन pits संग, सबै भन्दा स्वादिष्ट एक मानिन्छ। तिनीहरूले यस मामला मा, workpiece अझ flavorful छ भन्छन्। तर तपाईं एक पत्थर संग जामुन पकाउन भने, स्टोर जाम छ भनेर मनमा राख्न वा बीउ मा केहि पदार्थ विष मा परिवर्तन गर्न थाल्छ किनभने मुरब्बा, एक वर्ष भन्दा कुनै थप हुन सक्छ। तपाईं पनि फल को विकल्प ध्यान गर्नुपर्छ - चेरी सुन्दर र धनी रंग संग धेरै पाकेको हुनुपर्छ। तयार गर्न pits संग चेरी देखि जाम, कुनै विशेष उपकरण तपाईं आवश्यक छैन। सारा प्रक्रियाको बारेमा5र आधा घन्टा लाग्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, कि समय को सबैभन्दा workpiece बस जिद्दी हुनेछ। खैर, व्यञ्जनहरु खाना पकाउने लागि जामुन को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू Zaharevsy, Shubinka, Turgenevka र Podbelsky र Anadol हुन मानिन्छ।
खाना पकाउने चेरी देखि जाम pits संग
त्यसैले हामी बाहिर आंकडा गर्न को लागि एक बेरी चयन गर्न के आवश्यक छ छ को जाडो लागि घर तयारी। पाकेको को, गाढा चेरी सबै भन्दा राम्रो व्यवहार प्राप्त। जामुन को 1 किलो मा, तपाईं चीनी को 1300 G र पानी 300 एमएल आवश्यक हुनेछ। पहिलो फल को peduncle (शाखा) बाट साफ गर्नुपर्छ र राम्ररी कुल्ला। उपयुक्त आकार को एक पैन मा पानी मा चीनी dissolving पछि, स्टोभ मा डाल तरल जोश गरौं र, निरन्तर जगाएर, एक समयको लागि खाना पकाउन। जामुन थप्न र गठन भएको फोम हटाउने,5मिनेट को लागि जोश। अर्को, गर्मी देखि पैन हटाउन र मिठाई ठूलो5घण्टा खडा गरौं। को workpiece संग भाँडा फेरि, आगो धारण पछि,5मिनेट को एउटा ठूलो लागि जोश। pits तयार गर्दा एक ड्रप प्वाला मा फैलाउन छैन संग जाम चेरी। अन्तिम चरण मा यो, शांत बैंकहरू धारण र जाडो चिसो सम्म एक गाढा ठाउँमा पठाउन आवश्यक छ। यस लेखमा उल्लेख गरिएका, यो देखि सानो मात्रा मा हड्डी समावेश अपघटन मा रूपान्तरित छ जो amygdalin पदार्थ, एक वर्ष भन्दा लागि यस्तो तयारी भण्डारण गर्न सिफारिस गरिएको छैन Cyanide एक घातक विष -।
pits "अभिमुखीकरण बैठक" संग चेरी देखि जाम खाना पकाउने
यस विनम्रता तयार बीउ संग, र बिना बेरी रूपमा लिन सकिन्छ। 1 किलो। चेरी बारेमा 500 ग्राम चिनी आवश्यक छ। पहिलो, राम्ररी जामुन कुल्ला, र बालाको तिनीहरूलाई सफा। , को पट मा फल को आधा राख्नु चीनी को 250 G खन्याउन। अर्को, बाँकी जामुन संग कवर र त्यसपछि बालुवा छिडकना। जाम लागि preform को चेरी रस दिनु3घण्टा बाँकी गर्नुपर्छ। निर्धारित समय बितिसकेको छ जब, मध्यम गर्मी मा खाना पकाउने लागि कन्टेनर राख्न र जोश बेरी ठूलो गर्न ल्याउन, 5-7 मिनेट लागि प्लेट मा छोड्नुहोस्। भयो। pits संग चेरी को जाम, जो को नुस्खा (तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, आफ्नो तयारी दुई पटक कम चिनी आवश्यक र जामुन आफ्नै रस मा पकाएको छन्), sterilized जार र रोल कवर मा राखिएको हुनुपर्छ अघिल्लो एक देखि अलि फरक छ। फेरि, आफ्नो आफ्नो जीवन एक वर्ष भन्दा कुनै थप हुनुपर्छ।
ओवन मा पोर्क कसरी Bake गर्न? आफ्नो तालिकाको लागि सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
ओवन मा आलु संग च्याउ Casserole: विशेषताहरु पकाउने, नुस्खा र समीक्षा
टमाटर पेस्ट संग Lecho: एक नुस्खा। lecho लागि सामाग्री
ओवन आफ्नो खाल मा पाकेका आलु: खाना पकाउन व्यञ्जनहरु
केक "Ingres Berdz" - छोराछोरीको जन्मदिन लागि ठूलो उपहार
को भ्क्याल मा पर्दा बन्धन लागि उपकरणहरू को एक प्रकार - पर्दे लागि हुक
Cossack जुनिपर: बिरुवाहरु लागि रोपण र मायालु
मर्मत पछि सफाई: लोकप्रिय सेवा
"Kuplaton" बेबी: समीक्षा, आवेदन र संरचना को सुविधाहरू
इन्जिन लागि हीटर के हुन्? इन्जिन लागि हीटर कसरी चयन गर्न
नागरिक Entrepreneurial गतिविधि: विशेषताहरू
प्रोवेंस शैली हो ... प्रावधान शैली कोठा (फोटो)
वन expanses प्रेम नोट: केही मशरूम Bashkiria खाद्य र कुन व्यक्तिहरूलाई - कुनै!
जाभा फुल, वा चीन गुलाब: हेरविचार घर मा